गरिबीको रेखामुनि सीपका धनी नै किन?::
गरिबीको रेखामुनि सीपका धनी नै किन?
परम्परागत सीपका धनी दलित समुदायको सीपलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण नगर्दा यस समुदाय भूमिहीन र गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन्।
परापूर्वकालदेखि सीपमा आधारित पेसा अँगाल्दै आएका हरेक दलित समुदायसँग कुनै न कुनै सीप छ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा शिवा तामाङले लेखेकी छन्। “यो अवस्था आउनुमा उनीहरूको सीपलाई आधुनिकीकरण नगर्नु हो,” अधिकारकर्मी चक्रमान विश्वकर्माले भने।
विशेषगरी हातमा सीप भएका वर्ग आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न हुुनुपर्ने हो तर मेहनत गर्ने वर्गलाई छुवाछूतलगायत विभेद गरिएको छ । उनीहरूको मेहनत र सीपबाट उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको छैन।
“खुला बजारको अवधारणामा आयातमा जोड दिँदा परम्परागत सीप भएका वर्गको आर्थिक अवस्था नाजुक छ,” विश्वकर्माको तर्क छ।
परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनलगायत दसवर्षे जनयुद्धमा पनि दलित समुदायले योगदान दिएका थिए, त्यसबाट केही राजनीतिक परिवर्तनमात्र देखियो तर सामाजिकलगायत दलितको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक नै छ।